सुनसरीमा पुल निमार्णमा ठेकेदारको चरम लापरवाही ! यात्रुलाइ सास्ती (हेर्नुस भिडियो | सुनसरीमा पुल निमार्णमा ठेकेदारको चरम लापरवाही ! यात्रुलाइ सास्ती (हेर्नुस भिडियो – हिपमत
सुनसरीमा पुल निमार्णमा ठेकेदारको चरम लापरवाही ! यात्रुलाइ सास्ती (हेर्नुस भिडियो
पुल निमार्णमा ठेकेदारको चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । दुहुवी इनरुवा सडक खण्डमा पर्ने पुल निमार्णको जिम्मा पाएको कम्पनी नाइस कन्सल्टेन्सिको लापरवाहीको कारण जोखिम बढेको हो । गत फागुन महिना बाट सुरु भएको पुल ७७ असार मसान्त सम्म सक्नु पर्ने हो । ठेक्का पाएका कम्पनीका ठेकेदार सिरहा का रसिद रैन ले निमार्ण स्थलमा कुनै पनि सावधानी पूर्ण काम नगर्दा दुर्घटना सहितका जोखिम बढेको स्थानीय पशुपति शाहले बताए । निमार्ण सुरु भएकै दिनबाट सो क्षेत्रमा जोखिम बढेको हुँदा पनि ठेकेदारले कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए ।
निमार्ण स्थलमा ठेकेदारले कुनै लागत सहितको बोर्ड र कुनै वारी पारी सावधानी चिन्न समेत राखेनन् । यसैको कारण सो स्थानमा ३ वटा दुर्घटना भइसकेको छ । गत एक साताको अवधिमा २ वटा मोटरसाईक दुर्घटना हुदा २ युवा गम्भीर घाइते भए । उनीहरुको अहिले नोबेल अस्पताल बिराटनगरमा उपचार भइरहेको छ । जेठ ९ गते सिद्धान्त यादव(२८) र जेठ १७ मा हेमन्त कुमार मण्डल(२४) घाइते भए । ति मध्ये हेमन्तको खुट्टा भाचिएको छ । भने शरिरका अन्य भागमा समेत गहिरो चोट लागेको श्याम देव मण्डलले बताए । निमार्ण गर्दा धेरै लापरवाही भएको हुँदा दुर्घटना भएको उनले बताए । नजिकै रहेका मान्छेहरुलाई निमार्ण स्थलको बारेमा थाहा हुने अरुलाई हुँदैन ।